Afaho ny profilanao: esory ny kaontinao Twitter
Alahady, Jolay 1, 2012 Alahady, Jolay 1, 2012 Michael Reynolds
Ekeko… ny fanambarana vao haingana momba ny misaraka teo anelanelan'ny Twitter sy LinkedIn no nanafana ny foko. Tsy ho afaka hanaparitaka ny fanavaozam-baovaon'izy ireo ao amin'ny LinkedIn intsony ny olona raha tsy mila miditra sy miditra.
Na dia fantatro aza fa mizara ny hafaliako ny hafa, inona no mahatsara sy maharatsy ny fampifandraisana ny kaonty Twitter anao amin'ireo tambajotra hafa? Satria mbola mamela an'io fanao io ny Facebook dia mbola mitranga izany. Na dia mitondra ahy voanjo aza izany dia hiaiky aho fa misy tombony vitsivitsy if nampiasaina tamim-pahamendrehana - fa saika tamin'ny iray no nanao izany.
Ka inona no mahatsara azy?
Mahomby. Tsy azo lavina fa lasa be atao isika rehetra ary manana fotoana voafetra hiaraha-miasa amin'ireo tambajotra sosialy marobe. Amin'ny alàlan'ny fandefasana fiara mandeha ho azy avy amin'ny iray hafa, azo antoka fa mandany fotoana ianao. Voapaika sy maina tsara.
Ankoatr'izay, raha mivarotra amin'ny media sosialy ianao, dia manitatra ny tratranao. Na izany aza ...
Ny iray amin'ireo lafy ratsy mampifandray ireo kaonty ireo dia ny "syntax hafahafa". Ny resadresaka amin'ny Twitter dia misy marika manokana amin'ity tambajotra ity, toy ny marika sy ny tenifototra "@" (jereo: inona ny tenifototra?). Raha mahita an'ireto tarehin-tsoratra ireto ny mpampiasa Facebook, dia atahorana hanilika azy ireo ianao satria misavoritaka sy hafahafa ny hafatrao. Mampihena ny fifamofoana izany.
Ankoatr'izay, ny fampiasana haino aman-jery sosialy mahomby dia matetika tafiditra ao mihaino, ary raha fanavaozana mampifandray rohy ianao dia tsy misy antony hidiranao sy hiresahana amin'olona. Tafiditra ao ianao fomba fampitana.
Ratsy izany rehefa mandeha amin'ny lalana hafa koa. Mahita olona manosika ny fanavaozana Facebook azy ao amin'ny Twitter koa aho, izay miteraka fanavaozana notapahina (toy ny izany) na mbola ratsy kokoa aza, rohy kamboty tsy misy fanazavana (toa izany).
Farany - manelingelina tsotra izao, sa tsy izany? Moa ve tsy reraka isika mahita ny fanavaozana ny satan'ny kamo feno tandindona ivelan'ny konteks sy bitsika notapahina?
Afaho ny profil-nao
Manoro hevitra anao aho handray io fotoana io mba hanafoanana mialoha ny kaontinao Facebook sy Twitter ary hanomboka tena izy mandray anjara amin'ny tambajotra tsirairay misy finiavana. Maminany aho fa hahita ambaratonga avo kokoa amin'ny fifamatorana ianao ary hampiasanao azy ireo araka ny niniana azy ireo: ara-tsosialy tambajotra.
Tags: FacebookLinkedInhaino aman-jery sosialyTwitter
Ny iPad Effect
Manararaotra naoty mpanjifa amin'ny hevitra momba ny fongotango
1 Jul 2012 amin'ny 12:10 PM
Matahotra aho fa tsy misy mihitsy ny fomba hanafoananako azy ireo. Manosika atiny iray taonina izahay ary ny tanjona dia tsy ny fanetsehana resaka matetika - mba hanomezana vaovao fotsiny ho an'ny mpihaino anay. Amin'izay lafiny izay, paikady mahomby izy io. Na dia te-handamina ny hafatra rehetra aza aho ary hijanona amin'ny media sosialy tontolo andro… Tsy azoko izany.
1 Jul 2012 amin'ny 8:06 PM
Nihevitra aho fa hiteny ianao hoe, Doug 🙂 Samy hafa ny fampiasantsika tambajotra sosialy ary raha toa ny handefa azy io amin'ny fomba hentitra dia misy dikany ny lojikao. Azo antoka fa manana aleoko (mazava ho azy) saingy tsy midika izany fa misy ny "marina" na "diso".
1 Jul 2012 amin'ny 8:03 PM
Heveriko fa ny mampifandray azy ireo dia hevitra tsara. Tokony hiaiky aho fa nampifandray azy ireo taloha, saingy tsapako fa raha tsy manana atiny vaovao amin'ny sehatra tsirairay ianao ho toy ny ampahany amin'ny marketing an-tserasera dia tsy manana antony hanarahana ny kaonty tsirairay ny olona.
Jul 2, 2012 amin'ny 10: 12 AM
Ny haino aman-jery sosialy mandeha ho azy dia mamonjy fotoana, saingy afaka esorina izany singa ara-tsosialy izany raha tsy mitandrina ianao. Mety ho mora ny mamoaka ny hafatra mitovy amin'ny tambajotram-pifandraisana mampiasa fitaovana media sosialy fa mila tadidinao ny manamarina ny kaonty tsirairay ary mamaly rehefa misy ny fangatahana. Tsy afaka "mametraka azy ianao ary manadino azy".
Jul 3, 2012 amin'ny 7: 18 AM
Manaiky tanteraka aho. Mitsitsy fotoana ao anatin'ny fotoana fohy, nefa misy vokany ratsy amin'ny fotoana maharitra. Tsy vitan'ny hoe misavoritaka fotsiny izy io, fa mifanohitra amin'ny fototra iorenan'ny media sosialy.